Query ? - MYSTERY ZILLION
January 2015 in Programming
English မှာတော့ Query က (A query isaquestion, especially one that you ask an organization, publication, or expert.)
Programming သမားအတွက်က Query လို့ခဏခဏကြားဖူးတယ်။ အဲ့ဟာကဘာကိုပြောတာလဲ ?
query ဆိုတာက တစ်စုံတစ်ခုကို ဆွဲထုတ်ဖို့ အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
database မှာတော့ SQL ဆိုတာကတော့ Structured Query Language ပါ။ database ထဲက data တွေကို ဆွဲထုတ်ဖို့ အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
HTML မှာတော့ query string ဆိုတာက html ကနေ server ဘက်ကို လိုချင်တဲ့ data ပေးပို့လိုက်ပြီး server ကနေ အဲဒီ data ကို ဖတ်ပြီး ပြန်ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
ဆိုရင် Aung ရဲ့ profile data ကို ပြမယ်လို့ ဆိုလိုလို့ရပါတယ်။
Thanked by2kaungkhantmintun K